कोरोना संक्रमण : मनोबल उच्च राखौं, तर आत्तिनुपर्दैन मंगलवार, फाल्गुन २०, २०७६
रोगहरुको राजनीति शनिवार, फाल्गुन १७, २०७६
सेकेण्ड ब्रेन र पाचन प्रणाली शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
सकारात्मक सोंच निराशावादी व्यक्ति हरेक अवसरमा समस्या देख्छ, तर आशावादी व्यक्ति भने हरेक समस्यामा अवसर देख्छ।” सोचाई सकारात्मक भए पानीले समेत औषधीको काम गर्दछ। विचार भनेको कार्यको जननी हो। उन्नति प्रगतिको निम्ति बीऊ हो। सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
प्रेमको ब्रेन प्रेमले मानिसको तनमनमा ठूलो प्रभाव पार्छ। प्रेमले शरीरमा इण्डोर्फिन, सेरोटोनीन तथा इम्युनोग्लोबुलिन जस्ता मस्तिष्क रसायनहरू, जसले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो भूमिका निभाउँछन्, निस्कासन गर्दछ। सकारात्मक प्रेमको विचारले खुसीका अणुहरू निस्कासन गर्दछ जबकि नकारात्मक विचारले हाम्रो इम्युनिटिलाई नै कमजोर पार्दछ, जसले गर्दा रोगहरूले आक्रमण गर्दछन्। शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६
चीनको विकासबाट हामीले के सिक्ने ? गत महिना वैदेशिक यात्राका लागि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन जाने अवसर मिल्यो । करिब एक साताको भ्रमणले मलाई मात्र हैन, हामी भ्रमण दलमा रहेका सातजनालाई नै एउटा सिकाइको नयाँ अनुभवको अवसर मिल्यो । शुक्रवार, माघ २४, २०७६
लुम्बिनीको विकास गर्ने कि जस्ताको तस्तै राख्ने ? लुम्बिनीका स्थानीयले क्वाकको शान्ति शहरलाई अस्वीकार गर्ने नै हो भने यसलाई उत्तरतिर सारेर विकास गर्न सकिन्छ। अत्यन्तै उच्च कोटीको यो आयोजनालाई सैनामैना नगरपालिका, कञ्चन र गैंडहवा गाउँपालिकाहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन्। क्वाकले बनाएको खाकामा अहिलेको लुम्बिनीलाई धर्म जोन मानेर केन्द्रमा राखिएको छ। अब त्यसो नगरेर लुम्बिनीलाई शान्ति शहरको अन्तिम विन्दु मान्न सकिन्छ। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकहरु उत्तरतिरको शान्ति शहरमा केही दिन विताएर अन्त्यमा पवित्र लुम्बिनी पुगेर फर्किन सक्छन्। बिहिवार, माघ २३, २०७६
आमाका नाममा... एउटा सन्तानको लागि आमा प्रेम र विश्वासको बास्केट हो । प्रेम र विश्वासको बास्केटमा हिंसाले कुनै ठाउँ पाउँदैन । आमा आफैमा एक महान शब्द हो । अझ भनौं, आमा शब्दकोषको एक शब्द भन्दा बढी प्रेम र मायाको पर्याय हो । निस्वार्थ मायाको पाठ सिकाउने आमा भन्दा ठूलो व्यक्ति संसारमै कोही हुँदैन । आमा धरती हुन् । किनभने आमाले धरतीलेझैं सहनशील भएर छोराछोरीलाई पालनपोषणका साथ सुरक्षा प्रदान गर्छिन् । आमाको महिमा अपरम्पार छ । आमालाई भगवानको जिउँदो रुप समेत भनिन्छ । आमाको त्याग, तपस्या एवं समर्पणकै कारण हामी सफल हुन्छौं । आमाको मायालाई कसैसँग तुलना गर्न सकिदैन । मंगलवार, माघ २१, २०७६
सत्यका लागि लड्ने देशभक्त सरकार आज हामी लामो समयको अन्तरालपछि केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा उपस्थित भएका छौं । हामी सबैले महशुस गरेको कुरा हो, यो दोस्रो बैठक अस्वभाविक ढंगले बिलम्व हुन गयो । आइतवार, माघ १९, २०७६
दाउपेच र हानथापभन्दा टाढाका नेता बलदेव शर्मा पोखरेल, बर्ष ८२, जो समर्पण र निष्ठालाई प्राथमिकतामा राखे । दाउपेच र हानथापलाई रोजेनन् । निष्ठा, मूल्य, मान्यता र आदर्श खोज्नेहरुका लागि एउटा उदाहारण बने । आफूले खडा गरेका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न सधैं प्रयासरत पोखरेल यही माघ ६ गते भौतिक रुपमा सधैंका लागि अस्ताएका छन् । शनिवार, माघ १८, २०७६
पानीले यसरी बढाउँछ ‘मेमोरी’ पानी र स्मरणशक्तिको सहसम्बन्धको बारेमा लिड्स युनिर्वसिटीका डा. ट्रेवोर ब्रोक्लेबैंकले एउटा अध्ययन गरेका थिए । सो अध्ययनले के प्रष्ट पार्‍यो भने जुन विद्यार्थीले दिनको ८ गिलास पानी पिउँथे, उनीहरूको स्मरणशक्ति निकै राम्रो थियो । यस्ता विद्यार्थीले परीक्षामा पनि राम्रो अंक प्राप्त गरेका थिए । पानीको यो महत्वलाई ध्यानमा राखेर दिनको कमितमा पनि २ लिटर अर्थात् ८ गिलास पानी पिउन ज्यादै उत्तम हुन्छ । शुक्रवार, माघ १७, २०७६
पाँचसात वटा प्रधानमन्त्रीका कार्यकालहरु जोड्दै आएको हो एमसीसी हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गरिसक्यौं, जनतामा सार्वभौसमसत्ता आइसक्यो, सार्वभौम जनता सबै कुराका अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन् । हामीले प्रणाली मात्र होइन, प्रकृया पनि लोकतान्त्रिक अवलम्बन गरेका छौं, अगाडि बढाएका छौं । जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवहारिक रुपमा निर्वाचन समेत गराएर कार्यान्वयन गरिएको छ । मंगलवार, माघ १४, २०७६
प्राकृतिक सम्पदामा भव्य पर्यटन संरचना हामी यहाँ सार्वजनिक सडक मिचेर घर बनाउँछौँ र हटाउन सरकारले विन्ती बिसाउँदा सरकारविरुद्धै लड्छौं । प्रकृतिले दिएको हरियालीबाहेक हामी आफैँले विस्तार गरेका क्षेत्र लगभग शून्यप्राय छन् हामीकहाँ । तर, त्यहाँ हरियाली प्रवद्र्धनमा लोभलाग्दो अवस्था देखियो । विमानस्थलबाट बाहिर जाँदा सडक छेउँमा टेका लगाएर राखिएका रुखहरु देखिएपछि सोध्दा जवाफ आयो–अन्तैबाट उखेलेर ल्याएका रुखहरु सारिएको । यहाँपनि हटाउनुपर्ने रुखहरुलाई कुनै विधिबाट अन्तै खाली ठाउँमा लगेर सार्नेबारेमा सोंच्न सकिन्छ । बिहिवार, माघ ९, २०७६
यसकारण बुटवल नै प्रदेश राजधानी राजधानी जनतालाई सुगम हुने, पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ । यसमा कुनै अर्को तर्क छैन । तर त्यो सुगमता कस्तो खालको हो भन्ने विषयमा भने छलफल आवश्यक छ । प्रदेश ५ मा १२ जिल्ला छन् । साविकका लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलका केही जिल्ला मिलेर प्रदेश ५ बनेको छ । यो प्रदेशका ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराईमा छन् । यहाँको जनसंख्या ४४ लाख ९९ हजार छ । त्यसमध्ये करीब २६ लाख जनसंख्या साविक लुम्बिनी अञ्चलमा छ । त्यसबाहेकको बाँकी जनसंख्या अरु ६ जिल्लाको हो । यस्तो अवस्थामा बहुसंख्यक जनताको सुगमतालाई हेर्दा राजधानी बुटवलमै उपयुक्त देखिन्छ । बिहिवार, माघ ९, २०७६
चोङ्छिङ् : २३ वर्षमा कायापलट भएको ‘कल्पनाको सहर’ लामो इतिहास र ऐतिहासिक प्रमाणहरुले चोङ्छिङलाई चिनिया सभ्यताको एक महत्वपूर्ण धरोहरका रुपमा उभ्याएको छ । ‘पा’जातीका मान्छेहरुको राज्यका रुपमा रहेको यो नगर ११ औं शताब्दीमा स्थापना भएको थियो । त्यसअघि सन् ३ सय १६ मा उक्त क्षेत्र तत्कालीन राजा किनले कब्जा गरेर Hofiang नामको एउटा सहर निर्माण गरेका थिए त्यतिबेला त्यसलाई चू प्रान्त भनिन्थ्यो । पछि सन् ११ सय ८९ मा चोङ्छिङको रुपमा स्थापना भएपछि यो चीनको महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र बन्यो । किनकि,यो एउटा मात्र क्षेत्र थियो जुन अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग व्यापारका लागि खुला गरिएको थियो । बुधवार, माघ ८, २०७६
आजको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह समाज विकासको क्रममा राज्यहरु बन्ने, भत्कने, फैलने, खुम्चने, टुक्रने र फेरि शक्तिशाली साम्राज्य बन्ने क्रम हुँदै आएको छ । प्राचीन नगरराज्यदेखि आधुनिक साम्राज्यको इतिहास यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै आएको छ । नेपालको इतिहास पनि यही प्रक्रियाले अगाडि बढ्दै आएको छ । आइतवार, पुष २७, २०७६